China Okpu ihe eji emepụta ihe na ngwaahịa | Chapman
Akpụzi mba. CPM-181013
Elu imecha Usoro VID21
Ihe Plastic PC + ABS
Akụkụ akụkụ 23g
Nkebi nke 125,00 X 63,00 X 22,00mm mm
Ebu ebu 346 X 396 X 337mm
Aha Aha Okpomoku na-achịkwa egbe
Akpụzi Ogwe 1 + 1
Ebu ebu S136
Etiti oge 25ụbọchị
Ebu Cycle Oge: 28 nke
Anya: Ihe eji eme ihe eji eme ihe omimi nke infrared bu iji otutu ihe omuma nke ihe di anya. Ngwaọrụ ahụ bara uru na ọnọdụ ebe ọ na-esiri ike iru ihe ahụ ka ịdekọ okpomọkụ.
Dịka ọmụmaatụ, temometa IR nwere ike ịba uru mgbe ị na-atụle ọnọdụ okpomọkụ nke nkeji ikuku nke na-adịkarịghị erute. I nwekwara ike iji ihe ntanetị nke Infrared iji nyochaa arụmọrụ nke sistemụ jụrụ igwe ma ọ bụ chọpụta ebe ọkụ ọkụ na sistemụ eletriki na ogwe nwere nnweta dị ụkọ.
Ize Ndụ: Temperaturetụ okpomọkụ dị n’ebe dị anya nwere uru ya. Ọ bụghị okpomọkụ niile ka enwere ike ịtụle site na ịnwe ya ozugbo. Otu ihe atụ bụ ịgba ọkụ.
Ndị ọrụ ọkụ na-ejikarị temometa IR amata ebe dị ọkụ na ọkụ ọkụ. Ngwaọrụ ndị a na-enyere ha aka inweta nsonaazụ ziri ezi na-etinyeghị ndụ ha n'ihe egwu.
Ọzọ ngwa na-abụghị kọntaktị temometa bụ na nlekota oru ulo oru dị ka ji esi mmiri ọkụ, ite-ọku uku, na elu-okpomọkụ usoro ọkpọkọ. Iji ngwaọrụ ndị a, ndị ọrụ nwere ike ịlele usoro nke usoro ndị a nke ọma maka ikpo ọkụ na-enweghị ịkpọtụrụ mmadụ.
A na-ejikwa ngwaọrụ ndị a enwere ike ịtụ okpomọkụ na mpaghara ndị na-egbu egbu ma ọ bụ ihe egwu. Agbanyeghị, ịnweta temometa IR kwesịrị ekwesị edepụtara maka ihe atụ ziri ezi dị oke mkpa iji gụọ akwụkwọ ọgụgụ dị mma na nke ọ bụla n'ime ngwa ndị a.
Ije: Igwe temomita IR bu kwa ihe ngwaike nke achoro iji tuta okpomoku nke ihe ndi n’eme n’ime ya. Ebe ọ bụ na ngwaọrụ ndị a na-anabata ozi ọma nke ukwuu, ọ gbaghị oge ịdebanye esemokwu na ọnọdụ okpomọkụ. Dị ka ndị dị otú a, IR temometa dị mma maka ịlele okpomọkụ nke ihe ndị na-agagharị ebe ọ bụ na ọsọ nke ihe ahụ enweghị nsonaazụ.
Ihe atụ nwere ike ịgụnye ịlele ọnọdụ okpomọkụ nke eriri ebu na osisi nhazi, igwe na-akpụ akpụ, rollers, na ihe ndị ọzọ na-agagharị ebe njikwa okpomọkụ dị mkpa.
Nke gara aga: Bank kaadị akwụmụgwọ naa naa igwe
Osote: 34 na 4 pin njikọ